Mashandisiro anoita B2B Vatengesi Vanofanira Kukwira Kumusoro kwavo Zvekushambadzira Maitiro | Martech Zone
China, Kukadzi 9, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Sezvo isu tichienderera mberi nekubvunzurudza vatungamiriri vekutengesa, kutsvagisa mafambiro epamhepo, uye nekuona mhedzisiro yekuedza kwedu kubatsira vatengi vedu, hapana mubvunzo pamusoro pesimba rekushambadzira zvirimo kweB2B yekuedza kwekuedza. Mabhizinesi ari kutsvaga kwavo kunotevera kutenga online kupfuura nakare kose.
Dambudziko, zvakadaro, nderekuti makambani ari kuburitsa yakawanda isingashandi zvirimo. Vashambadzi veB2B pavakabvunzwa chikonzero nei kushambadzira kwavo zvemukati kuchishanda, 85% yakarova mhando yepamusoro, zvirimo zvinobudirira zvisikwa pamusoro. Tinoenderera mberi nekupusha a raibhurari yezvinyorwa taura nevatengi vedu pachedu kwatinonyora mikana nezvikanganiso muzvinyorwa zvavo, uye tinoshanda kugadzira zvakatsanangurwa, zvemhando yepamusoro misoro yenyaya.
Maitiro ekushambadzira ane hunyanzvi akatarisa mukugadzira nekugovera zvakakosha, zvinoenderana, uye zvinowirirana zvemukati kukwezva nekuchengetedza vateereri vanotsanangurwa zvakajeka - uye, pakupedzisira, kutyaira kunobatsira vatengi chiito.
47% yevatengesi veB2B vakataura kuti vane zvipingaidzo mukupa zviwanikwa kuchirongwa chavo chekushambadzira zvemukati Isu tinozviona izvi pamwe nevatengi vedu uye tashanda kushanda kugadzirisa matanho ekuderedza mutoro kune vatengi vedu.
Semuenzaniso, isu tine mumwe mutengi uyo watinoronga mangwanani mamwe emwedzi wega wega kuti atore akawanda podcast. Panguva imwe chete, isu zvakare tinorekodha pavhidhiyo. Isu tinobva taziva ma podcast, tinogadzira mavhidhiyo, tinoaendesa kune vanyori vedu, tinogadzira zvinyorwa zvevaridzi uye vakawana midhiya, tobva tangounganidza mhedzisiro otomatiki mune tsamba yemavhiki. Kugona uku kunoguma nechidimbu chenguva yakashandiswa mukuvandudza zvemukati uye zvakasimudzira kubatanidzwa nekuda kwekuenderana pamatanho.
Makambani haafanire kutsvaga mari yekuwedzera kana zviwanikwa zvekushambadzira zvemukati kana ruzhinji rwezvirimo haisi kunyatsoburitsa mhedzisiro. Kana makambani, pachinzvimbo, akadzikisa vhoriyamu yezvisina kugadzirwa zvemukati uye akatarisa pane zvakabatikana, zvakakosha, uye zvinodiwa zvemukati, ivo vanogona chaizvo kuchengetedza nguva uye nekuwedzera kukanganisa kwezvavanoita.
Sekureva kweContent Marketing Institute, 39% muzana vari kuronga kuwedzera yavo yekushambadzira zvemukati kushandisa pamusoro pemwedzi gumi nembiri inotevera
Nenzvimbo inogara ichichinja yekutengesa zvemukati, kufambirana nematekinoroji azvino uye maturusi zvave kudikanwa, ndosaka makambani mazhinji uye akawanda ave kufunga kuti gadziriso yavo ibudirire sezvinobvira mumakore anotevera. Aya makambani ari kuda kwazvo kushandisa mari hombe vachitsigira chirongwa chavo chekushambadzira gore rino riri kuuya. GroupM inofungidzira kuti iyo yakazara kushambadzira masevhisi mashandisirwo epasirese achapfuura iyo $ 1 tiririyoni zvikumbaridzo kekutanga muna 2017. Jomer Gregorio, Dhijitari Kushambadzira Philippines
Heano anoshamisa anodzidzisa infographic, B2B Yemukati Yekushambadzira Maitiro mu2017.
Tags: 2017b2bb2b zvemukati zvekushambadzira mafambirob2b kushambadzirab2b kushambadzira maitiroContent Marketingzvemukati zvekushambadzira maitirodigital kushambadzira PhilippinesMaitiro